The Irrawaddy's Blog: သူတို့ဘက်က အမြင်
ကျေးဇူးကန်းသူတို့၏ လှည့်စားမှုကို ခံခဲ့ရသော ဖခင်ကြီး
ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ဧရာဝတီ ဘလော့ဂ်က စတန့်ထွင်ပြီး လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သွားလေသူ အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေဝင်းရဲ့ သမီးတယောက်က သူ့အိမ်မှာ သူ့အဖေ ဦးနေဝင်းပုံချိတ်ပြီး အောက်မှာ အဲဒီအတိုင်း စာတန်း ထိုးထားတာပါလို့ တွေ့မြင်ခဲ့ရသူတယောက်က ပြောပါတယ်။
ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေအရကတော့ နေဝင်းလက်ကျန်မျိုးဆက်ကလည်း အားမတန် မာန်လျှော့နေရပေမယ့် အခွင့်သာရင်တော့ လက်စားချေချင်ပါသတဲ့။
Posted in: News , Politics , သတင်း , နိုင်ငံရေး
သူ့သမီးကိုပြောလိုက်ပါအုံး ဦးနေ၀င်းကကော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် ကျေးဇူးကန်း ခဲ့တာဆိုတာ...
ဆော်ကြကွာ ... ပြည်သူတွေကို အိမ်ကြက်ချင်းအိုးမဲသုတ်ခဲ့ ကောင်တွေ၊ သူတို့ကိုလဲ ပြန်သုတ်ပေးရမယ် .... ဆော်သာဆော် .... လူလိုရင်ပြော ....
Compared to Bo Than Shwe, Bo Ne Win did not fade out Bogyoke's profile and frequently cited Bogyoke as national hero in Dr.Mg Mg's book.
စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီးခြောက်တာ မပါဘူး၊ ပစ်ရင် တည့်တည့်ပစ်တယ်ဆိုပြီး တကယ်တည့်တည့်ပစ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ ဦးနေ၀င်း ကိုယ်တိုင်လည်း ပြည်သူကို ကျေးဇူးကန်းခဲ့တာဘဲမလား၊ နောက်လူတွေလည်း ဒီလမ်းစဉ်ဘဲလိုက်ရမှာပါ သူ့ လို ဘဲ ဘ၀နိဂုံးမချုပ်ခင် တစ်နေ့ မှာပေါ့။ အာဏာရှင်တွေရဲ့ နေ၀င်ချိန် ဟာ ဘယ်တော့မှ မလှပပါဘူး။
ကိုချစ်ဖေ said... :
အာဏာရှင်တွေရဲ့ သမိုင်းမှာ ကျေးဇူးဆိုတာကော ရှိလို့လားဗျာ အကျိုးစီးပွားပဲ ရှိကြတာပါ။
"Thu-Khores" (thieves) are complaining about "Thu-Whets" (thieves of thieves), they're more or less the same. "Kha-Pike-Hnites" (pick pockets), breeds of pre-Ne Win era, are preparing for election ("Ah-Yan-Khway").
All three of them are stinky.
---- said... :
အားလုံးအတူတူပဲ...သူမသာ ကိုယ်အသုဘပဲ..ဒီတော့ ဗိုလ်နေ၀င်းသားသမီးတွေက သန့်းရွှေသားသမီးတွေကို သတ်၊ သန်းရွှေသားသမီးတွေက ဗိုလ်နေ၀င်းသားသမီးတွေကို ပြန်ပစ်၊
သူတို့အချင်းချင်း ဟင်္သာကိုသောင်းပျက်ကိန်းဆိုက်မှ ပြည်သူတွေ ကောင်းစားမှာ..။ ဗိုလ်နေ၀င်းဘက်ကလူတွေကို ပြောချင်တယ်...လုပ်ရင်လည်းမြန်မြန်လုပ်ပါလို့...။ လေနဲ့တော့ မအာနဲ့..။
တိုင်းပြည်ကိုစော်ကားတဲ့ ဘယ်အာဏာရှင်မှ ဇတ်သိမ်းခန်းလှတယ် ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာလည်းမရှိဘူး ကမ္ဘာမှာလည်း မရှိဘူး။ သနားပေမယ့် ဝမ်းမနည်းဘူး (MTL)
We should say Bo Ne Win who did not oblige to leadership commitment endosed by people, not to peoples' benifits.